Muraayadaha muraayadaha indhaha ee haweenka ee SoMa Black / Black - Hanukeii
SoMa Madow / Madow
24 saacadood gudahood Koonfurta Suuqa, xaafadda quraafaadka ah ee magaalada San Francisco, California, waxay nooga filnayeen inaan qaadanno dhammaan dhiirrigelinta aan u baahanahay oo aan ku baabtiiso muraayadaha muraayadaha indhaha oo wata astaamaha caanka ah ee aaggan Mareykanka u bixiyay: SOMA.
Intii aan joognay San Francisco, waxaan awoodnay inaanu indha indheynno nolosha halkaas ka jirta inay ku socoto xawaare aad u sarreeya, in dadku ay si dhakhso leh u socdaan, iyagoo degdegaya, iyagoo aan si fiican u garanaynin halka ay u socdaan iyo iyadoo aan si dhab ah diiradda loo saarin hareerahooda.
Waa run in baaxadda dhismayaasha, matxafyada isdaba jooga ah la keenayo ama tirada maqaayadaha riyada ee ku badan xaafadda, ay khibraddu xoogaa ka dhigayso; Si kastaba ha noqotee, waxaan diirada saareynaa raaxeysiga iyo qadarinta kuwa yar yar, iyo waxyaabo yar oo umuuqday inay si tartiib tartiib ah ugu socdaan wadooyinka magaaladan aan dhamaadka lahayn; Isbarbaryaaca joogtada ah ayaa ah waxa SOMA siinaya shaqsiyaddeeda, xaafada ay wax waliba ugu muuqdaan farsamo iyo tikniyoolajiyad, taas oo, markaan gees u leexano, soo bandhigno beer leh labyrinths, oo leh ubaxyo dhalaalaya oo ubaxaya.
Abuuritaanka ururintayada SOMA, Waxaan siinay maamuus South of Market anagoo qaabaynayna muraayadaha muraayadaha ee nooca XL, oo ​​u dhigma cabirka xaafada Californian. Waxaan ka yara dhaqaaqnay degenaanshaha aan ka dareemeyno xeebta iyo ciidda, fikradda xorriyadda ee loo fahmay marxalad maran oo sugeysa in la noolaado, waxaana diiradda saarnay qaabka waddada, nolosha sicir-bararka iyo dadka , yaa sidoo kale na siin kara dareen xorriyad ah waqti ka waqti isagoo dareemaya sida aan looga dhex dareemin dadka badan wuxuuna noqon karaa qof kasta oo aan dooneyno markaan rabno.
Laguna Bi-Magenta / Madow
Laguna Bi-Magenta / Madow 44.95 €
Laguna Madow / Madow
Laguna Madow / Madow 44.95 €
Laguna Tortoise / Madow
Laguna Tortoise / Madow 44.95 €
Geel SoMa / bunni
Geel SoMa / bunni 44.95 €
Dhuxusha SoMa / Madow
Dhuxusha SoMa / Madow 44.95 €
Southcal Madow / Madow
Southcal Madow / Madow 44.95 €
Southcal Green / Madow
Southcal Green / Madow 44.95 €
Southcal Cas / Madow
Southcal Cas / Madow 44.95 €